Shina Kavina matanjaka sy matevina ao anaty gorodona vita amin'ny karbônina fanamboarana sy orinasa | Volotsangana Volamena
Rihana volotsangana vita amin'ny karbaona matevina sy matevina
Ny ankamaroan'ny takelaka volavola volotsangana REBO dia namboarina tamin'ny takelaka 1.86m, 2.2m ary 2.5m na mihoatra (6.1, 7.2, 8.2 metatra) ary ireo halavam-bahoaka ireo dia misy vidiny lafo. Anisan'ireo halavany ireo, 1.86m no halavan'ny fenitra tsara indrindra ary ny halavany be mpampiasa. Ny fampiasana solaitrabe lava kokoa dia afaka mamonjy anao hatramin'ny 25% amin'ny decking.
Mazava fa ny hazo tropikaly dia tsy niadian-kevitra noho ny antony ara-tontolo iainana. Ny fahamarinana dia mampiseho fa ny takelaka fanaovana takelaka REBO® Bambu dia mahafeno ny fepetra rehetra takiana: sokajiana amin'ny kilasy faharetana 1 izy ireo ary mampiasa ny kilasy 4 araka ny EN350 / EN335, namboarina tamina kilasy afo Bfl-s1 araka ny EN 13501-1. Ny tabilao dia mahafeno ny fenitra E1 Eoropeana, ny famoahana formaldehyde amin'ny rivotra dia 0.05mg / m3 araka ny EN 717-1. Ny volotsangana dia matanjaka kokoa sy mateza kokoa noho ny hazo, izay mahatonga azy io ho fitaovana fananganana tsara ho an'ny trano ivelan'ny trano toy ny dabilio sy patio.
Ny ankamaroan'ny takelaka volavola volotsangana REBO dia namboarina tamin'ny takelaka 1.86m, 2.2m ary 2.5m na mihoatra (6.1, 7.2, 8.2 metatra) ary ireo halavam-bahoaka ireo dia misy vidiny lafo. Anisan'ireo halavany ireo, 1.86m no halavan'ny fenitra tsara indrindra ary ny halavany be mpampiasa. Ny fampiasana solaitrabe lava kokoa dia afaka mamonjy anao hatramin'ny 25% amin'ny decking. Aza mieritreritra hoe ny ela no tsara indrindra. Manome soso-kevitra i REBO fa maka 1,86m ny halavany, izay be mpitia eran'izao tontolo izao. Ny fizotran'ny fikirakirana karbaona sy hafanana tsy manam-paharoa an'ny REBO dia miteraka famoahana matevina avo lenta, sariaka ary maharitra. Ny rafitry ny lohan-doha sy alika dia manome fomba iraisana mora. Ny sisiny mimenitra dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny clip vy tsy misy fangarony ary mampiseho fijery tsara nefa tsy mahita ireo sary.
Teo aloha: Tsindry hafanana tsara gorodona volotsangana mavesatra any ivelany
Manaraka: Panel tontolon'ny rindrina vita amin'ny volotsangana matanjaka sy mahitsy